Home Horyaalka Ingiriiska Manchester United oo mudnaan siin doonta weeraryahan cusub
Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay mudnaanta siineyso saxiixa weeraryahan cusub inta lagu jiro suuqa kala iibsiga xagaaga.
Kooxda Ole Gunnar Solskjaer ayaa kaliya dhalisay seddex gool wax ka yar marka loo fiiriyo deriskooda Manchester City, kuwaasoo 14 dhibcood ku hogaaminaya hogaanka Premier League.
Si kastaba ha noqotee, United ayaa diiwaangelisay seddex barbaro oo isku xigta oo goolal la’aan ah tartamada oo dhan, iyagoo ku guuldareystay inay wax gool ah ka dhaliyaan Real Sociedad, Chelsea iyo Crystal Palace.
Sida laga soo xigtay Manchester Evening News , dhibaatooyinkii ugu dambeeyay ee kooxda ayaa laga yaabaa inay ku dhiiri geliyaan Solskjaer inuu mudnaanta koowaad ka siiyo weeraryahan kale.
Bruno Fernandes ayaa ka horeeya Marcus Rashford iyo Edinson Cavani kuwaasi oo kala dhaliyay sagaal iyo lix gool.
Dhanka kale, Harry Maguire , Victor Lindelof iyo Eric Bailly ayaa qaatay culeyska shaqo ee dhanka dambe..
Previous articleNani oo ka hadlay xaalada Paul Pogba ee Manchester United
Next articleManchester City ayaa bartilmaameedsaneysa seddex saxiix oo cusub xagaagan.